ठूलै डिजाइनमा बाबुराम–उपेन्द्र एकता - Jhilko
काठमाडौं । भारत लोकसभा तथा कयौं राज्यहरुमा विधानसभा निर्वाचनको माहोलमा हेलिरहेका बेला अमेरिकासहित पश्चिमा राष्ट्रहरु नेपालमा राजनीतिक बर्चस्व स्थापित गर्न लागिपरेको घटनाक्रमहरुको विश्लेषणबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालमा पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरुले होली वाइनदेखि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसम्मको दौडधुपमा देखाएको सक्रियता सीके राउतको सुरक्षित अवतरण र संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीको एकीकरणसम्म आएर जोडिएको छ ।
उता भारतमा पश्चिमा शक्तिहरुका लागि नरेन्द्र मोदी अनुकूल नभएको कुरा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा मोदी सरकारले देखाएको अलमलले यसअघि नै प्रस्ट पारिसकेको छ । यसर्थ, मोदी र भाजपा पश्चिमा अनुकूल नहुने हुनाले विपक्षमा लागेर मोदीलाई आच्छुआच्छु पारिरहेका छन् ।
मोदीविरुद्ध पश्चिमा शक्तिसँग परम्परागतरुपमा निकट मानिएका कांग्रेस आईसहितको यूपीए गठबन्धनलाई सघाउन यसै कारण लागेको कतिपय भारतीय मिडियाले विश्लेषण गरिरहेका छन् । पश्चिमा शक्तिकै कारण त्यहाँ बामपन्थी पार्टीलाई हराउन यूपीएमा मोर्चाबन्दीसम्म कांग्रेसले गर्न दिएन ।
भारत निर्वाचनमा अल्झिएको यही बेलामा नेपालमा आफ्ना राजनीतिक र अन्य आफ्ना निकट ‘विङ’ लाई सुदृढ गराउन पश्चिमाहरु यसैकारण कस्सिएर लागेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएका बेला पश्चिमा राष्ट्रहरुले गरेको राजनीतिक गतिविधिले पुणेमा बिम्स्टेक संयुक्त सैनिक अभ्यास रोकिएकोसम्म घटनाक्रमहरु यसअघि नै प्रदर्शित भएका हुन् ।
सीके राउतको अवतरण
भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ र अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईए नेपालको मामलामा एक ठाउँमा रहेको विश्लेषण पहिलेदेखि नै गरिंदै आएको हो । ‘रअ’ नरेन्द्र मोदीको योजना विपरीत नै देखिँदै आएको छ ।
त्यसैले पश्चिमा प्रभावका मानिएका सीके राउतलाई अपर्झट राजनीतिक अवतरण गराइयो । उनलाई वैधानिकता दिन ‘जनअभिमत’ शब्दको सहारा दिलाइयो । उनका गतिविधि र नाराबाट भारतको बिहारमा समेत असर पार्ने अनुमान भारतले गरेको थियो । यसैले उनलाई भौतिक रुपमा समेत खतरा रहेको अड्कल गरिएको थियो । जनमत पार्टी, जसको विवादित अर्थ हुन्छ । उनी जहिले पनि विखण्डनकारी नारा लिएर आउनसक्ने आधार निर्माण गर्न नै पश्चिमाहरुले उपयोग गर्ने गरी उभ्याइएका पात्र हुन् । तर यतिले नै मधेसमा उपद्रो मच्चाउन काफी थिएन ।
जनमत पार्टी बनेयता उनको गातिविधले तुल पकड्ने सम्भावना कमै देखियो । र, राजपासँगको प्राकृतिक एकताको चर्चा भइरहेका बेला डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीच अचानक एकता सम्पन्न भयो । यो एकताको गुरुयोजना पनि पश्चिमा शक्तिहरुले मिलाप गराइदिएको अर्थमा आँकलन गर्न सकिन्छ । सानातिना कुरामा पनि टिप्पणी गर्ने सीके राउतले यो एकतामा कुनै टिप्पणी नगर्नुले यो अड्कललाई ठीक हो भन्ने आधार प्रशस्त गरेको छ ।
राजनीतिको उर्वर भूमि
नेपालमा अस्थिरता पैदा गराउन तराई क्षेत्र उर्वर हुनसक्ने अघिल्ला आन्दोलनहरुले प्रस्ट पारेकै विषय हो । डा. बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि सारेर तराईमा आन्दोलन अगाडि नबढ्ने कुरा उनले संविधान जारी भएलगत्तै संसदबाट राजीनामा दिएर तराई झरेर आन्दोलन उठाउन खोज्दा असफल भएबाट स्पष्ट भइसकेको छ । तराईकै अनुहार रहनुपर्ने भएकाले उपेन्द्र यादव उपयुक्त पात्र हुन् । उपेन्द्र यादवको काँध चढेर बाबुराम भट्टराईलाई अगाडि ल्याउने एउटा विकल्प बनाइएको हुनसक्छ ।
काजमा राजनीति गर्ने बाबुराम
तत्कालीन मोटो मशालले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाकालमा नै जनयुद्ध गर्ने तयारी गरेको थियो । जनयुद्धको वैचारिक र भौतिक तयारी गर्दैगर्दा काठमाडौंमा सेक्टरकाण्डले पारेको क्षतिबाट उठ्न केही वर्ष लाग्यो । तयारीकै सिलसिलामा संसदीय व्यवस्था ०४६ सालमा स्थापना भयो । यसले नयाँ राजनीतिक कोर्स प्रारम्भ भयो । हठात् डा. बाबुराम भट्टराई जनयुद्धको लाइनलाई मानेर यो प्रक्रियामा सामेल भए ।
राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको भनाइलाई मान्ने हो भने डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय संस्थापन पक्षले जनयुद्धमा काजमा खटायो । नेपालमा पहाडी इलाकाबाट अब राजनीतिक अस्थिरता पैदा गराउन नसक्ने अवस्थामा तराईमा विदेशी शक्ति केन्द्र केन्द्रित हुँदैछन् । अब बाबुरामलाई त्यतै खटाइएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाट नै केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार ढलाउने, बीचमा प्रचण्ड या माधवकुमार नेपाललाई अगाडि सार्ने र ढाल्ने, त्यस्तै परेमा नेकपा विभाजन गराउने, राजनीतिक अस्थिरता पैदा गराउने अनि विस्तारै डा. बाबुराम भट्टराईलाई अफगानिस्तानका हामिद कार्जाई या नेपालका खिलराज रेग्मीजस्तै कुनै नाममा सिंगारेर ल्याउने प्रपञ्च बनाइएको आँकलन कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले गरेका छन् ।
डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवको पार्टीले उत्पीडित वर्गको नारालाई सामान्य रुपमा उठाएर जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले सामाजिक सद्भावलाई बेस्सरी भड्काउने गरी आन्दोलन सिर्जना गर्ने सम्भावना छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको नारामा जोड गर्ने कुरा पनि गरिएको छ ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति सारतः फरक पार्ने विषय होइन । विदेशी शक्ति केन्द्रलाई कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा सजिलो हुन्छ । बहुकेन्द्र हुँदा धेरैलाई रिझाउने र खुवाउनेभन्दा आफ्नो अनुकूलको कार्यकारी राष्ट्रपति भएमा फटाफट काम गराउन सजिलो हुन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको नारा मुख्यतः अहिले शक्ति केन्द्रको प्राथमिकताको हो ।
एकतामा प्रश्नैप्रश्न ?
उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईका बीचमा भएको एकताले धरै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । माओवादी जनयुद्ध प्रारम्भ गर्नका लागि रिहर्सल भइरहेका बेलामा डा. बाबुराम भट्टराईलाई खुल्ला मोर्चाको नेतृत्व गर्ने गरी जिम्मा दिइयो । जनयुद्धको मुद्दा घनीभूत भइरहेका बेलामा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराईको भूभागलाई एक मधेस, एक प्रदेश र नेपालमा कसैको पनि मातृभाषा नभएको हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्छ भनेर माओवादीमा उपेन्द्र यादवमार्फत् अजेण्डा छिराइयो । हिन्दी भाषालगायत उपेन्द्र यादवको अजेण्डाको विरोध गर्ने जयकृष्ण गोइतसहितका नेताहरुलाई बाहिर निस्कने वातावरण बन्यो ।
प्रचण्ड स्टालिनवादी संगठनात्मक ढाँचामा चलेको भन्दै पार्टीमा मुद्दा स्थापित गर्ने बाबुराम भट्टराईलाई उपेन्द्रले पार्टीमा पूरै साथ दिएका थिए । पार्टीमा अस्वस्थ संघर्ष बनाउन थालेपछि प्रचण्डसँग वार्ता गराउन मात्रिका यादवले उपेन्द्र यादवलाई दिल्लीमा लैजाँदा केही प्राविधिक कारणले प्रचण्ड उपेन्द्र रहेको ठाउँमा नपुगेका कारणमात्र पक्राउ पर्नबाट बचेको कुरा माओवादीको त्यतिबेलाका परिपत्र पढ्दा पनि थाहा लाग्छ । त्यतिबेला मात्रिका यादव, सुरेश आले मगरसँगै गिरफ्तार परेका उपेन्द्र यादवलाई दिल्लीमा नै छाडिनु तर मात्रिका र सुरेश आलेलाई नेपाल सुपुर्दगी गर्नु सामान्य परिघटना कसरी मान्ने ?
मोहन वैद्य ‘किरण’, सीपी गजुरेल ‘गौरव’ गिरफ्तार हुने, बाबुराम भट्टराईसहितका उच्चस्तरका नेतासँग ‘रअ’ को सम्पर्क भइरहने विषय माओवादी पार्टी र आन्दोलनमा उठिरहेको थियो । पटनामा बाबुराम पक्षका कसैलाई नसमात्नु तर पार्टीका संस्थापन पक्षलाई समातिएको कारणबारे अझैसम्म प्रश्न उठिरहेको छ । यसको यथोचित वा चित्तबुझ्दो जवाफ आएको छैन ।
संघीयताको विषय माओवादीलाई तत्काल सम्झौतामा स्थगन गराउन लगाएर उपेन्द्र यादवमार्फत् स्थापित गराइयो । गौर, कपिलवस्तुलगायत ठाउँमा माओवादीका विरुद्ध उपेन्द्र यादवमार्फत् भौतिक आक्रमण गरियो । तराई क्षेत्रमा जातीय, क्षेत्रीय सद्भाव भड्काउन खोजियो । केही समय त्यहाँ भागदौडको अवस्था नै पैदा भयो ।
कोन्ट्राको उदय ?
पछिल्ला वर्षमा प्रचण्डसँग उपेन्द्र यादवको निकटता खेल्नका लागि मात्र थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उनको योजना षडयन्त्र र लड्ने प्राथमिकता मात्र हो । डा. बाबुराम भट्टरार्इंसँगको एकता र समझदारी पुरानै हो भन्ने कुरा यहाँ आएर प्रस्ट हुन्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई जनमतबाट सिद्धिसकेको अवस्था थियो । यो बेलामा उपेन्द्र यादव, जो पहिलेदेखि नै माओवादीलाई सिध्याउनका लागि खडा गरिएका पात्र थिए, उनीसँग जोडिदिएर बचेखुचेको माओवादी आन्दोलन र विचारका विरुद्ध सशक्त रुपमा आक्रमण गर्ने सम्भावना बढेको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्टका विरुद्ध कोण्ट्राको रुपमा प्रयोग गरिएका पात्र उपेन्द्र यादवसँग डा. बाबुराम भट्टराईको एकताले उनको बारेमा विगतदेखि उठेका प्रश्न र भ्रम धेरै खुलासा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन् । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अर्काे सफलता, तराईको अर्काे सशस्त्र समूह पनि मूलधारको...
यसरी बन्नेभयो निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग
सेना आफैँले तीन सुरुङ र केही ठूला पुलबाहेक सडक कालोपत्र, नाला, कल्भर्ट, पर्खाल र...
परोपकारी अर्बपति बिल गेट्सले स्थापना गरेको माइक्रोसफ्ट कम्पनीले दर्जन बढी पत्रकारहरूलाई...